Sidee Twitterku kaaga caawinayaa inaad waddo hawlgal qoto dheer | Martech Zone
Sidee Twitterku kaaga caawinayaa inaad waddo hawlgal qoto dheer
Isniintii, September 15, 2014 Douglas Karr
Waxaa jira kala-guur weyn oo ka dhacaya warshadaha warbaahinta bulshada oo aad u xiiso badan. Awoodda si toos ah loogu riixo kaqeybgalka isdhexgalka bulshada halkii laga noqon lahaa in dib loogu celiyo taraafikada bartaada. Qof kastaa wuu ogyahay in mar kasta oo aad qof weydiisato inuu gujiyo, waxaa jira hoos-u-dhac ku jira heerarka jawaabta.
Shirkad ku dhiirrigelinaysa wax soo saarkooda ama adeegyadooda barta Twitter, sameynta isticmaale ayaa ka tagaya iibka iibka, bogga wax soo saarka, bogga "ku dar gaadhigii", bogga lacag bixinta, iibsiga ugu dambeeya waxay keenaysaa ka tagitaan sare. Twitter wuxuu gacan ka geysanayaa sii deynta xiisaha leh ee Kaararka Twitter iyo Ka iibso Tweet Badhanka.
Kaararka Twitter u oggolow suuqleyda inay ku soo lifaaqaan sawirro hodan ah, fiidiyowyo iyo waayo-aragnimo warbaahineed si ay uga kaxeeyaan ka-qaybgalka. Waa tan tusaale ka mid ah Ciyaaryahanka Kaarka:
Ku xidhnow oo soo hel: Sheekada Twitter-ka ee ku taal 1:40 http://t.co/TRRiDAbkUR
- Xayeysiinta Twitter (@TwitterAds) November 8, 2013
Hadaad jeceshahay inaad tijaabiso Kaararka Twitter dibadda, Qaraxshe - Iskaashatada Suuqgeynta Suuqgeynta ee Twitter - waxay soo bandhigtay xalka beta iyadoo la adeegsanayo habka maaraynta maaddada. Suuqleydu waxay abuuri karaan kaararka iyo bogagga ay ku socdaan iyagoon qorin koodh iyaga oo adeegsanaya adeegsigooda. Xayeysiiyayaashu waxay raadinayaan inay kexeeyaan natiijooyinka qiimaha sare sida muuqaalka fiidiyowga, jiilka hoggaaminta, iyo iibsashada hadda waxay si fudud u abuuri karaan kala duwanaansho fara badan si ay u helaan isku-darka guusha ee cinwaanada, sawirrada, nuqul, URL-yada, iyo badhamada wicitaanka-ficilka.
Abuuraha Mawduuca Kaararka Twitter
Falanqaynta Tusmada Kaarka Twitter
Dab-shidiyaha bogagga u-socodka caadadu waxay la yimaadaan astaamaha beddelaadda Twitter ee horeyba loogu dhajiyay. Astaamahan beddelka ahi waxay awood u siinayaan suuqleyda inay la socdaan beddelaadyada aaladaha iyo booqashooyin badan, taas oo aan markii hore u suurtagal ahayn xayeysiinta dhijitaalka ah, tusaalaha muuqaalka awoodda, taas oo si weyn kor ugu qaadeysa waxqabadka xayeysiinta soo iibsiga. iyo dib u helida mobilada iyo aaladaha kale.
Ka iibso Tweet
Twitter ayaa sidoo kale tijaabinaya a badhanka iibsiga tooska ah ee durdurka, Horumar xiiso leh oo loogu talagalay xirfadleyda e-commerce. Kani maahan wax xiiso leh sababtoo ah sahlanaanta isticmaalka, sidoo kale waa wax weyn maxaa yeelay macaamiisha ayaa si badbaado leh ugu hayn kara macluumaadkooda lacag bixinta barta Twitter-ka mana ahan inay ku soo galaan macluumaadka si is daba joog ah dukaan kasta oo ay rabaan inay ku ganacsadaan.
Tani waa tallaabo hore oo ka mid ah shaqadeena dhismaha ee Twitter-ka si aan uga adeegsanno aaladaha moobaylka kuwo ku habboon oo fudud, waxaan rajeynayaa xitaa madadaalo. Isticmaalayaasha waxay heli doonaan helitaanka dalabyo iyo badeecad aysan ka heli karin meel kale waxayna ku dhaqmi karaan iyaga tooska ah barnaamijyada Twitter-ka ee Android iyo iOS; iibiyeyaashu waxay heli doonaan hab cusub oo loogu beddelo xiriirka tooska ah ee ay la dhisayaan kuwa raacsan iibka.
Tags: ka soo iibso tweetdab shididisku darkakaarka ciyaaryahankaShopIgniterTwitterbadhanka iibsiga twitterkaararka twitterPartner Suuqgeynta Suuqgeynta Twitter
Ganacsigaagu ma ka faa'iideysanayaa fiidiyowga bulshada?
7 Istaraatijiyadaha Kordhinta Macaamiisha Meheraddaada